ဟယ်လို! ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳခံုးညမ်းဂိမ္း:အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားအချာအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးမှာအသင်းအမည်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစတင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ၏ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၁၅၊ကျနော်တို့ကြောင်းသိကြရမှာတွေအများကြီးယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစား။ နည်းနည်းဘဲသိကခက်ခဲတဲ့ရရန်အားဖြင့်ကနဦးအနှစ်ဖန်တီးရန်အတူတကွသွင်းထားဒီကြယ်မော်ကွန်းတိုက်၏ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းဂိမ်းကစားပျော်မွေ့။, မှတ်ချက်ဒါကကျနော်တို့လည်းဆက်လက်ပေးအကြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်နောင်အနာဂတ်:ဒါကြောင့်တစ်ခုခုရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဂုဏ်ယူကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်စွာခံစားရကြောင်းနေသော်လည်းအားလုံး၏ဒါခေါ်ပြိုင်ပွဲ၊ကျွန်မတို့ဟာအမှန်တကယ်အသွား-မှအကောင်လျှင်လက်လှမ်းဖို့သင်လုပ်ချင်တဲ့အချို့သောပျော်စရာ၊ကစားရန်လွယ်ကူသော၊XXX ဂိမ်းများသောအကျိုးအခါသင်ကောင်းစွာပြုပါ! ဒီအချောအဆှကောင်းမြတ်ဖို့ချည်နှောင်စေပည္ဆိုင္ရာအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ–သင်ကယူသောအရာကိုနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးနှင့်အနိုင်ရ? ကျနော်တို့မှာမကြာမီထွက်ရှာမည်:ရိုးရှင်းစွာမှတ်တမ်း၌လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်တက်ပြီးတော့ကျွှန်တော်သင်စမ်းသပ်ဖို့!, ခံုးညမ်းဂိမ်းဒီနေရာမှာသင်ပြမှကြွလာသောအခါအကြီးအရွယ်ရောက်ပြီး၊သင်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးယဇ်အရည်အသွေးသို့မဟုတ်အရေအတွက်အမိန့်အဘယျသို့ရရလိုခငျြ။ ဒါကြောင့်၊အဘယ်ကြောင့်မမြင်နိုင်ရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေရဲ့အတွင်း? အသံတူအစီအစဉ်ကို!!!!
အ XXX ခေါင်းစဉ်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်ပြီးအာရုံစိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပေါ်ခံုး-စတိုင်ညမ်းကစားပြိုင်ပွဲ၊ဖွင့်ဖို့အရေးကြီးသဘောပေါက်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အချို့သောအဘို့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လျော့ရဲရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်မှရသွားတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ချင်ဂိမ်းကစားအတွင်းအတူခံစားသည်ရှိဒြပ်စင်၏အမြန်နှုန်းလိုအပ်တဲ့အတွက်၎င်းတို့၏ခေါင်းစဉ်–ကိုယ့်သင်တို့ကဲ့သို့မျှော်လင့်ချင်ပါတယ်ဆိုမှခေါင်းစဉ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာ။ လက်ရှိဒေတာဘေ့စ၏ဂိမ်းငါတို့သည်သင်တို့အဆင္ေမှာ ၄၈ ခေါင်းစဉ်–ဒါကြောင့်နီးစပ် ၅၀! ငါတို့သည်သင်တို့ပတ်ပတ်လည် ၈ သစ်ဂိမ်းများအပေါ်တစ်ဦးနှစ်စဉ်အခြေခံ။၊နှင့်အတူတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ခြင်းအုတ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်းခေါင်းစဉ်တွေကိုအနည်းငယ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးနှင့်အချိန်စားသုံးကြွင်းသောအရာထက်။, ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောအကြောင်းစဉ်းစားပြီဒဏ်ခတ်လက်ျာချိန်ခွင်လျှာတွင်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်။၊ဒါပေမယ့်ကြည့်ဖို့မျှော်သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကတည်းကဘယ်အရာကိုအရေးပါဆုံးအရာကိုလူအကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းထင်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာချင်ကြောင်းတောင်းဆိုရန်ပြီးနောက်သင်ပျော်မွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအတွက်အနည်းငယ်၊ကျွန်တော်တို့သိကြကုန်အံ့ကျေးဇူးပြုပေါ်အဆိုပါအရာရှိကဖိုရမ်များဘယ်လိုသင်သွားကြဖို့နဲ့သင်သည်အဘယ်သို့မြင်ချင်ပါတယ်အနာဂတ်အတွက်! မရှိခြင်း၏တုံ့ပြန်ချက်ကြောင့်ငါတို့အဘို့အဘယ်သို့င်သိရန်ပူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဖွင်:ကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းအချက်အလက်လိုအပ်နေဖန်တီးရန်အသုံးပွုပင်ပိုကောင်းညမ်းဂိမ်းများ–သံကဲ့သို့ကောင်းတစ်ခုစာချုပ်၊လက်ျာ?
ခံုးညမ်းဂိမ်းများလုံးဝရာက္ဇာအခြေခံအနက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ဘယ်တော့မှကွောငျးဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ဘာမှမခံစားဖို့အမိန့်၌သင်တို့၏အချိန်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်များအတွက်တစ်ဦးတည်းရှိစေရန်၏ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းလူတွေယုံကြည်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့်ချက်ချင်းမတူခံစားရကြကြောင်းအရတိုက်ခိုက်နှင့်အတူဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ထင္ရေ။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်သိကြ၏အနာကျင်မှုကိုအတွက်အမြည်းတို့သည်ဖယ်ရှားရန်၊ဒါကြောင့်များ–မယ့်အစားကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ငတက်သင်လက်လှမ်းဖို့ဒီဂိမ်းအားဖြင့်အများဆုံးခေတ်သစ်။ ယခု၊ကျနော်တို့ကူညီပံ့ပိုး Chrome၊ေပ၊မြေခွေးနှင့်အော်။, ဒီတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တဦးတည်းရှိသည်တို့၏အလေးရွေးချယ်စရာ၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကစားခံုးညမ်းဂိမ်းများမရှိဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများ။ တော်တော်အေးမြ၊အယ်? အိုးဟုတ်ကဲ့–ဤအချက်အားလုံးထုတ်ကုန်များ။ အထူးအရပျ၌အစနစ်ပင်အပြောင်းအလဲအတွက်များသည်နှင့်အနူးရွေးချယ်စရာအခါဝန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်အပေါ်တစ်ဦးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်တက်ဘလက်။ အဲစာသားအသုညအခြေအနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်အတွင်းဤစိတ်ကူးနှင့်အဆင္ေ-pleasured ပုံစံဂိမ်းဒေတာဘေ့စ။ အတင်းပတ်ကျနော်တို့လုပ်ထားပါတယ်များမှာ၊သို့သော်လည်းအဆုံးရလဒ်အရာတစ်ခုခုသည်ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နှင့်အတူမင်္ဂလာရှိ၏။, ဒီကြိုးပမ်းမှုနှင့်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သုံးစွဲခဲ့သည်လစာငွေချေ–တောင်မှအဖွဲ့ဝင်များအတွင်းတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့!
ကတည်းကကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေဂိမ္းအတွက်ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားခဲ့၊ငါတို့အဘို့အရေးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းရဏာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကြည့်၊ကျနော်တို့သွားမယ့်အမှုတ်နှင့်အတူသင်၏စိတ်ကိုယုံ storylines သို့မဟုတ်အကွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်ကြောင်းပြိုင်ဘက်ကိုအကောင်းဆုံးစာအုပ်အားလုံးအချိန်:ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေရာတွင်ကူညီရန်သင့်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှုပ်များချွတ်။ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊အဖြစ်မယ့်အရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးရဖို့သင်ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းဂရပ်ဖစ်သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမတှေ့လိမျ့မညျ။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အထူးပြုများ၊ဒီဇိုင်နာ၊ဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်များနှင့် ၃D စွယ်စုံကျမ်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများအားလုံးရေကူးကန်သူတို့ရဲ့ဒါကြောင့်တစ်ဦးကြည်လင်ပြတ်၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစု၏ဂိမ်းပြည့်စုံ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်ယုံကြည်သောချဉ်းကပ်၏အကောင်းဆုံးအစည်းအတွက်ဤနယ်ပယ်တွင်:ကျွန်ုပ်တို့၏အနုပညာလက်ရာသည်အနည်းငယ်အဆက်အခြားညစ်ညမ်းခံုးယိုနှင့်ကျွန်တော်မကြောက်င့်ကြောင်းဝန်ခံဖို့ကျနော်တို့လိုခံစားရတာအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်! တစ်ခုတည်းသောခြိမ်းခြောက်မှုအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကြောင့်ကလေး၊ကျွန်မတို့ပိုကောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆိုတော့တိုင်းတစ်နှစ်!
သင်မျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ၊၊အားလုံးနီးပါးကျွန်ုပ်တို့၏အခံုးညမ်းဂိမ်းများရှိသည်တွမ်ပိုင်း၊ဒါကြောင့်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလျှင်ဖြစ်ခြင်းမြန္ေ-ယှဉ်ပြိုင်မှု၊သင်တို့သည်ဤမျှပြုနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုရမ်များလည်းရှိသည်တိကျတဲ့ပုဒ်မသီးအသီးအဘို့ဂိမ်းတွင်လူအပေါ်အကြံဉာဏ်ရယူခြင်းအမြင့်ဆုံးရမှတ်သို့မဟုတ်ပယ်ပြီးခေါင်းစဉ်အတွက်အမြန်ဆုံးအချိန်ပမာဏကို။ ခင်ဗျားအံ့သြသိလျှင်သင်အကြောင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအချို့လူများထဲသို့သွင်းဖို့ကြိုးစားနေရနံပါတ်တစ်စက်အပြောက်–မလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပေ၊အကြောင်းသေချာသည်င့်။, သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းထပ္မံျဖည့္စြက္သည္အတော်လေးမကြာခဏအဖြစ်အသစ်လှည့်ကွက်များမှာရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးကျွန်တော်တို့လည်းမျှော်လင့်မှထုတ်လွှတ်သည့်အောင်မြင်မှုများစနစ်မှာလအနည်းငယ်အမည်ကိုထည့်လူတိုင်းအချင်းချင်းဆန့်ကျင်။ သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်အပြိုင်အဆိုင်များ၏ညစ်ညမ်းဂိမ်းများ–ကြောင်းဒဏ်ငွေရဲ့! ကိုယ့်ရဲ့သိပြီးအစဉ်အမြဲရွေးချယ်မှုရဲ့အပေါ်ဇယားအရချင်တယ်ဆိုရင်သို့ဆင်းအချို့သောနက်ရှိုင်းစွာနှိုးဆှအရေးယူဂိမ်း။